Basecamp oo Daahfuray Qaabab Mashruuc ah | Martech Zone
Basecamp oo Daahfuray Moodello Mashruuc ah
Arbacada, Oktoobar 10, 2012 Douglas Karr
Inta badan waxa aan sameyno sida suuqleyda waa soo noqnoqasho… baaritaanka iyo qorista boostada, baaritaanka iyo qaabeynta infographic, tafatirka iyo daabacaadda fiidiyowga, horumarinta iyo fulinta ololaha suuqgeynta. Basecamp ayaa dhawaan lagu daray Mawduucyada Mashruuca codsigeeda.
Naqshad mashruuc ah, waxaad horay ugu sii dejin kartaa dadka iyo liisaska wax-ka-qabashada si aad si dhakhso leh mashruuca kor ugu qaaddo.
Kadib, waxaad si fudud kubilaabi kartaa mashruuc adoo furaya shaxda mashruuca waadna baxaysaa oo socotaa!
Waxaan u isticmaalnaa Basecamp maalin kasta hay'addeena. Aaladda kaliya ee kaliya ee aan runtii jeclaan lahaa inay haysato waxay ahayd liistada wax-qabadka ee caalamiga ah oo aan mudnaanta siin karno dhammaan mashaariicdeenna halkii aan ka shaqeyn lahayn mid kasta oo ka mid ah.
Tags: Basecampmashruucatemplate mashruuc
Kudar Jebiye Iframe Goobtaada
Oktoobar 10, 2012 at 4:38 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida Doug! Tani waxay la jirtay qaabkii hore ee Basecamp,
laakiin waxay u egtahay inay u sii deynayaan nooca cusub. Kuwaas oo kala ah
aad isticmaaleyso Ma arkin tan jawaab celin wanaagsan oo ku saabsan nooca cusub.